Ukuphupha ngeMandelbaum Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ikhaya lomthi wom-amangile lalikumazantsi mpuma eAsia. Isiqhamo sawo, i-almond, sisetyenziswa ikakhulu njengokutya, kodwa siyasetyenziswa nakwimveliso ezininzi zezithambiso.
Umzekelo, i-marzipan eyaziwayo yenziwa nge-almond eneswekile kunye namanzi e-rose, ahlala esetyenziselwa ukubhaka, ngakumbi IKrismesi. Ukongeza, iiamangile, kunye nomhlaba, zisetyenziswa kwiikeyiki kunye neetarts, kunye nakwiikeyiki kunye namaqebengwana. Ubisi lweAlmond luyathandwa kakhulu.
Umthi we-alimondi siwukhulisa ikakhulu ngenxa yeentyatyambo ezintle ezipinki, ezinokuba sisihombo sokwenene. Isiqhamo asinamdla ungako apha. Kukho nemithi ekuthiwa yeyokuhombisa imithi yeamangile engazivelisi iiamangile kwaphela.
Kodwa, myalezo mni onokuziswa ngumthi weamangile njengomfuziselo wephupha? Ufuna ukusibonisa ntoni xa evela ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, ukubona komthi wom-amangile ephupheni kunokubonwa ikakhulu njenge uphawu oluqinisekileyo itolikwe. Umphuphi unokulindela uphuhliso oluhle kwi el mundo vuka.
Njengophawu lwephupha, umthi we-amangile oluhlaza ungabonisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye unokulilungisa ikamva labo ngokweminqweno yabo. Ukuba umthi wom-amangile uqhakaza ephupheni, kunokuba njalo. Ukuthobela yiza nolindelo kunye nethemba ekudala ulithanda. Ukuba iintyatyambo ezintle zomthi wom-amangile ziphambili ephupheni, oku kungabonisa izibonelelo ezinokonwatyiswa kungekudala kwilizwe lokwenyani, okanye kubonise umtshato osondeleyo.
Ukuba amasebe omthi onjalo ahamba emoyeni ephupheni, ukuze amagqabi awe, kunokuba njalo umzuzu wokonwaba Bhengeza ebomini bokuvuka. Ukuba umntu ophuphayo ubeka isebe lomthi wom-amangile kwientyatyambo ephupheni lakhe ukuze alonwabele, uya kuba nempumelelo ebomini bakhe. Ukuba ubona i-bark yomthi wom-amangile xa ulele, akufuneki uthembe umhlaba ovukayo kakhulu.
Umthi we-amangile owileyo okanye owomileyo ungabonisa njengomfanekiso wephupha ngokuhlalutya iphupha ngokubanzi ukuba isigaba solonwabo nempumelelo kubomi bomphuphi siyaphela. Kwakhona, elandelayo Inqanaba lobomi Kusenokwenzeka ukuba ndandingonwabanga.
Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolikwa kwengqondo
Ukubonwa ngokwembono yengqondo, umfanekiso wephupha "umthi weamangile" unokunyusa umnqweno wokulungileyo impilo uphawu. Lowo uleleyo kufuneka alwazi olu langazelelo ngephupha lakhe. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyenze eyakho indima ekuthobeleni.
Ukuba umthi wom-amangile ukhula ephupheni kwigadi yakho, oku kunokuchaphazela Ukuphuculwa komntu Babhekisela emaphupheni, nto leyo luphawulwa ingakumbi uvuyo olukhulu ebomini.
Ukubona umthi wom-amangile epakini kunokubonisa ukuba umntu angathanda ukuba nomtsalane kwindawo ahlala kuyo kwihlabathi elivukayo. Ukuba uhamba ngaphaya kwemithi yeamangile okanye nokuba uhlala ezantsi kwakho, kufuneka uqaphele ukuba ebomini bokuvuka ukwimeko yokuvumelana kwangaphakathi kwaye Ibhalansi ifunyenwe.
Ukuba izinambuzane zihlasela umthi weamangile ephupheni, kungacetyiswa ukuba uzikhathalele. Ngenxa yokuba unokuziva uninzi kwihlabathi elivukayo ixesha noxinzelelo. Le meko kufuneka iguqulwe ngokukhawuleza.
Uphawu lwephupha «umthi weamangile» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika uphawu lwephupha "umthi wom-amangile" ngengqondo yomthi, yiyo loo nto iphupha elinje Amandla obomi kanye njengoko amandla obuphupha angabonisa oko. Oku kuyakusetyenziswa ngumntu oleleyo kwihlabathi lokuvuka.